Julian Assange mikasika ny Fiandrianana sy Fanarahamaso Niomerika, Tao amin’ny #NETmundial2014 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Marsa 2019 4:57 GMT
Natália Viana, Sérgio Amadeu, Roy Singhay, Jacob Appelbaum. Sary avy amin'ny @WebWeWant tamin'ny Twitter.
Tamin'ny herinandro farany teo, tany São Paulo, tonga avokoa mba hiresaka mikasika ny fiandrianana sy fanarahamaso niomerika ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Aterineto i Julian Assange, Jacob Appelbaum, Natália Viana, Sérgio Amadeu, ary i Roy Singhay. Ny resaka nataon'izy ireo no hetsika nalaza indrindra tao amin'ny Arena, toerana ofisialy nanaovana ilay fihaonana NETmundial tamin'ny herinandro lasa teo.
Nanamarika tamin'ny fomba niavaka ny niresahana (sy ny tsy niresahana) mikasika ny fanarahamaso nandritra ny NETmundial i Natália Viana, mpamorona ny Masoivohom-panjakana momba ny Asa Fanaovan-gazety Fanadihadiana sy fifandraisana fototra eo amin'i Brezila sy Wikileaks. ”Mitovy amin'ny tsy firaharahiana ny elefanta fotsy ao anaty efitra ny tsy firesahana mikasika ny fitsikilovana sy ny fanarahamaso”, hoy izy, naneho ireo ahiahy nitovizan'reo mpandray anjara maro nandritra ny herinandro. Niantso ny governemanta Breziliàna izy mba hanome fialofana ho an'i Edward Snowden sy hanao fifanarahana eo amin'ny Fanjakana Mikambana (Britanika) sy Ekoatora mba hanamorana ny fialofana ho an'i Assange. Nilaza izy fa tokony haka toerana tsy mihambahamba manoloana ireo olana ireo i Brezila, fepetra mila alaina mialohan'ny hidirana ao anatin'ny adihevitra manerantany hiarovana ny zon'ireo mpampiasa.
Nifantoka tamin'ireo antoka mikasika ny fitahirizana ny angondrakitra ao anatin'ny Artikla faha-15 amin'ny Marco Civil izay lazainy fa hampitombo ny tsenan'ireo angondrakitra manokana ao amin'ny firenena i Sérgio Amadeu, mpampianatra ao amin'ny Oniversite Federakin'ny ABC, satria ”hanomboka hanao izany ankehitriny ireo tsy nitahiry angondrakitra manokana teo aloha.”
Niady mafy ho an'ny fampiasana ny kriptografia ho an'ireo karazana fifaneraserana rehetra i Jacob Appelbaum mpamorona ny Tetikasa Tor sady mpamorona soramiafina, hetsika izay hanome fahafahana ho an'ny olontsotra hitantana indray ireo torohay mikasika azy. ”Mifampiaro isika rehetra rehefa miaro ny tenantsika,” hoy izy. Ao anatin'izany rindran-kevitra izany ihany, nilaza i Roy Singhay, Tale Jeneralin'ny ThoughtWorks, fa na dia amoahana vola be ho an'ireo governemanta aza ny fitsikilovana ny olona tsirairay, mbola hamoahan'izy ireo vola aman-tapitrisany izany raha toa ka ataontsika ho fenitra ny fanoratana ho soramiafina ny serasera rehetra. Samy efa nanainga ny vahoaka hisafidy rindrambaiko manana loharano misokatra avokoa izy roa ireo ary hanafitra fitaovana manana loharano misokatra mora ampiasaina sy tonga dia mampiditra ho azy ny fanaovana soramiafiana.
Nifarana tamin'ny andiana fanamarihana tena nandrasana be avy tamin'i Julian Assange, izay nanatrika izany tamin'ny alalan'ny Skype ilay fivoriana. Nilaza i Assange fa ny hasarobidin'ny fivoriana toy ny NETmundial dia ny fandraisany anjara amin'ny fitsinjaram-pahefana. Noho izany, nilaza izy fa tokony ho ampiasain'ny fiarahamonin'olontsotra ny toerana tsirairay izay hitany azony ampiasaina ary alainy izany mba handraisana anjara amin'ny famoronana fifandanjana fahefana vaovao. Nanambara i Assange fa rafi-piainana vaovao eto an-tany ny fiarahamonina vaovaon'ny fampahalalambaovao. ”Afaka mamokatra rafitra hafa isika, mety ho tena tsara tanteraka … [miaraka amin'ny] tambajotra vaovao ahitana fikambanana maro, fotokevitra sy soatoavina vaovao.” Nofaranany tamin'ny alalan'ny antso avo lehibe ho an'ny olontsotra rehetra ”mba hanararaotra ny fotoana araka izay azontsika atao, satria raha tsy manao izany isika, ny hafa no hanao izany.”